करीमनजवा, क्रीमुनजावा - जावा
ठेगाना: करीमनजवा, कबिप्टेन जेपारा, जव तान्ग, इन्डोनेशिया
फोन: +62 24 76738248
क्षेत्र: 71.2 वर्ग मीटर। किमी
जनसंख्या:9हजार मान्छे
इंडोनेशिया को सबै भन्दा अमीर जनावर र पौधे संसार को 44 राष्ट्रीय उद्यानहरु को विस्तार मा साथै साथ नै धेरै भंडारहरु र चिडियाघर मा ध्यान दिए। एक अपवाद छैन एक सानो रेफ पुरातत्व क्रीमेन्डेभावा, जुन हाल हालको राष्ट्रिय पार्क को स्थिति प्राप्त भयो। यस संरक्षकको इलाका भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूले सुरंग्य कोरल चट्टानहरू, अपरिचित समुद्र तटहरू , जंगली प्रकृति र रोचक पैदल यात्राका ट्रेलहरू पर्खिरहेका छन्। करीमन्द्भावा - डाइविंग र सर्फिङ प्रशंसकहरू, साथसाथै अमीर इन्डोनेसियनहरूका लागि एक मनपर्ने ठाउँ।
क्युमेन्ड्भावा मध्य जावा को तट को उत्तर उत्तर स्थित स्थित आकार को 27 द्वीपहरु मा 27 अलग अलग हुन्छन्। पुरातत्व को सबै भन्दा ठूलो द्वीप, कर्णुन्डोभा, जो सारा समूह र उनको साथी Kemudzhan को नाम दिए। पर्यटकहरू र स्थानीयहरूको लागि सजिलो बनाउन सजिलो गर्नको लागि, यी टापुहरू छोटो पुल द्वारा जोडिएको छ। एकदम ठूलो आकार मेंजान्गान-बजर र मेनुजानन-केसिलको द्वीप हुन्। सबै भूमि क्षेत्रहरू जो द्वीपपूर्वी बनाउँदछ पहाडी राहत। राष्ट्रिय पार्कमा पर्यटक शिखर अप्रिलमा सुरू हुन्छ र अक्टोबरको अन्त्यमा अन्त्य हुन्छ। बाँकी समाचारहरू बाहिरिने गर्न केहि हद सम्म मच्छरहरू हुन सक्छ, त्यसैले छुट्टीका व्यक्तिहरूले विशेष क्यान्सरको साथ राम्रोसँग डोऱ्याउनुपर्छ।
कुल,9हजार भन्दा बढी व्यक्ति सुरक्षित क्षेत्रमा बस्छन। सबैभन्दा ठूलो गाँउ कमान्डाभावा टापुको दक्षिणी-पश्चिमी तटमा छ। अधिकांश स्वदेशी आबादी अंग्रेजी मा पाँच शब्दहरु लाई थाहा छैन, तर केहि टापुहरु जसको काम पर्यटन उद्योग संग जोडिएको हो, यस भाषा को माहिर हो।
स्थानीय मानिसहरू मुख्यतः माछा माछा मा व्यस्त छन्। यो भनिएको छ कि आर्चिपिलिको जनसंख्या, इस्लाम को प्रोफेसर, धेरै अनौठो छ। विशेष गरी यहाँ उल्लेख गरिएको पे्र देवदर हो, जुन कथित रूपमा एक जादुई शक्ति छ: साँपबाईटबाट निको पार्ने, जीवन लामो समयसम्म र चोरबाट आवासको रक्षा गर्न। काठ देवदरबाट शौचालय बनाउँछ, जुन पर्यटक पर्यटकको स्मारिकाको रूपमा खरीद गर्न सकिन्छ।
आरक्षित को प्राकृतिक खजाने
क्रीमन्ड्भावा नेशनल पार्कको अनोखा वनस्पति र जीव लामो समयसम्म भएको छ र अझै पनि चुम्बनको रूपमा वनस्पति र जीवविज्ञानहरू आकर्षित गर्दछ। आर्किपालागोका द्वीपहरू5प्रकारको पारिस्थितिकी तंत्रद्वारा वितरित गरिन्छ, जसका साथै तराईको पूर्वी वृक्षको साथ देवदार र सदाबहार मंगोदेव जंगली भूभागहरूको बीचमा समुद्र तटहरू लुकेको छ। करीमनजवा को पानी मा, ठूलो कछुआ र धेरै अन्य समुद्री जनावरहरू छन्। वैज्ञानिकहरूले माछाको 250 भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्। प्रायजसो शार्कहरू किनारेहरूमा तैरन्छन्, त्यसैले पानीमा मनोरञ्जनका प्रेमकहरू अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ। आश्चर्यजनक फ्लोरा र फिना अप्रत्याशित करेन्डुभावा द्वीपहरु द्वारा प्रतिष्ठित छ, जहाँ तपाईं $ 15 को लागि एक विशेष यात्रा को खरीद सकते हो।
राष्ट्रिय पार्क कसरी प्राप्त गर्ने?
पर्यटकहरू रिजर्वको द्वीपमा आराम गर्न चाहने पर्यटकहरूले कुरुनुनजावा वा वायुमण्डलमा जान सक्छन्। उदाहरणका लागि, जगजकार्ता , सेमरांग र बालीको उडानहरू नियमित रूपमा कम्जुआन टापुमा उड्ने, जुन देवरणुको हवाई अड्डा हो । हवाई जहाजमा उडान छान्दा विचार गर्नुहोस् कि यो सबैभन्दा छिटो छ, तर एकै समयमा, समुद्री पार्कमा पुग्न सबैभन्दा महान् तरिका। पैसा बचत गर्न, धेरै पर्यटकहरूले फेरी वा स्पीडबोट द्वारा यात्रा गर्न मन पराउँछन्। घाटमा सेयरंग र जपारा तीन हप्ताको दौडान भागिन्छ। तपाईं speedboat को लागि टिकट पूर्व बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
मिठाईबाट फूलहरू आफ्नै हातले
जन्मदिनको वर्षा एक चिन्ह हो
नदीमा तैरने किन सपना देख्छ?
चिनियाँ शैलीमा ड्रेस गर्नुहोस्
Asparks - analogues
Pippa Middleton साथीहरु र केट मिडलेटन संग पहाडहरुमा एक पूर्व-विवाह बैचोरेट पार्टी को आयोजन गरे
के तिनीहरू चिसो पाइरहेका छन्?
डग डूड सुपर प्रिमियम - दर्जा
प्लम जाम "पेटिमेटेका" - नुस्खा
अल्सेन्ड्र्रा अम्ब्रोसियोले आफ्नो जीवनमा अन्तिम समयको लागि चीनलाई विक्टोरियाको गुप्त देखाउँछन्
आफ्नै हातले काठको फर्नीचर
सर्दको लागि कुखुराको साथ श्राबेरीहरू - कच्चा जाम र जामुन पकाउने सबैभन्दा राम्रो व्यञ्जन
साथीलाई के गर्ने?
माइक्रोवेव ओवनमा गोभी
बहुविध मा लिओको
भान्सा टाइलहरू हलवेमा
10 सलाद पास्ता संग उत्कृष्ट गर्मी को छुट्टी को लागि
साना स्कुलका विद्यार्थीहरूमा ध्यान केन्द्रित
सर्जिया बगैंचामा लगगिया
राहेल रय र जय जी
चित्रकलाका लागि प्लास्टर